အဓိကကျသော လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်မှု ညွှန်းကိန်း ၅ ခု
အဓိကကျသော လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်မှု ညွှန်းကိန်း ၅ ခုလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တိုင်းဟာ သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုအောင်မြင်ချင်ကြပါတယ်။ ကိုယ့်ကုမ္ပဏီရဲ့ Facebook Page ထဲက Post တိုင်းကို ကိုယ့်ရဲ့အိမ်သားတွေက Like တွေ ပုံမှန်သေသေချာချာပေးကောင်းပေးနေနိုင်သလို ကိုယ်နဲ့လူကိုယ်တိုင်တွေ့ဆုံတဲ့ ဈေးဝယ်သူတွေက ကိုယ်လုပ်တာတွေကို ကြိုက်ချင်ကြိုက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်လုပ်ငန်း ဘယ်လ...
Visits : 3625
စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားတဲ့&nbsp;ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ အချက် ၅ ချက်သင့်ရဲ့ ကုမ္ပဏီမှာ ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကနေ အိုင်တီပိုင်းအထိ ဌာနတိုင်းက အရေးပါပါ တယ်။ ဒါကြောင့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ အောင်မြင်မှုအတွက် ဌာနတိုင်းအဖွဲ့တိုင်းရဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေက အဓိက အခန်းကဏ္ဍက ပါဝင်နေပါတယ်။ အားနည်းချက်လေး တစ်ခုဆိုရင်တောင် ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုရဲ့ အကျိုးစီးပွား၊ စွမ်းဆောင်ရည်နဲ...
Visits : 3817
How To Delegate The Right Tasks To The Right People: Effective Management Skills For Leadership Success
Learning how to delegate effectively is the key to leveraging yourself and multiplying your value to your company. Delegation allows you to move from what you can do personally to what you can manage.&nbsp;Delegation is one of the most important and effective management skills. Without the ability to delegate effectively, it is impossible for you t...
Visits : 4207
Last month, Apple initiatedaKeyboard Service Program for MacBook and MacBook Pro, after determining thata"small percentage" of the keyboards in 2015-2017 MacBook and 2016-2017 MacBook Pro models may experience keys that feel "sticky," repeat, or do not respond inaconsistent manner.Apple did not identifyacause for the issues, which they call...
Visits : 3786
If talking out loud to Alexa (or your digital assistant of choice) feels unnatural, you’re not alone. I’ve had Siri for as long as she’s been alive, yet I can count on one hand the number of times I’ve spoken to her. It’s always seemed easier to open an app on my iPhone or type inaGoogle query and get exactly what I’m looking for, rather than nav...
Visits : 4216
Microsoft is getting back into the cheaper tablet game today with the new Surface Go,asmaller, less powerful take on the popular Surface Pro device. The Go featuresa10-inch screen, integrated kickstand, Windows 10, andasimilar design to the Surface Pro, and starts at $399. It is available for preorder starting July 10th and will ship in Augus...
Visits : 3733
133 - 138 of ( 154 ) records